Marriott Resorts dị na Mexico na-akpọsa Director ọhụrụ nke Ahịa na Ahịa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Mexico » Marriott Resorts dị na Mexico na-akpọsa Director ọhụrụ nke Ahịa na Ahịa
Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ na -agbasa ozi Mexico • News • ndị mmadụ • Tourism • Akụkọ dị iche iche
Nchịkọta Marriott Cancun, nke nwere JW Marriott Cancun Resort & Spa na Marriott Cancun Resort, kwupụtara nhọpụta nke Glaucia Canil ka ọ bụrụ Director nke Ahịa na Ahịa.
N'ime ọrụ ọhụrụ ya, Canil ga -ahụ maka iduzi mbọ na ire ahịa ebe ntụrụndụ.
Ọ ga -ewepụtakwa atụmatụ maka ịba ụba ego wee rụọ ọrụ na ịre ahịa na mmekọrịta ọha.
Ebumnuche a ga -abụ ịhụ na ozi mgbasa ozi na -agbanwe agbanwe na atụmatụ nkwukọrịta mmekọrịta.
Onye otu ogologo oge nke ezinụlọ Marriott nke ụdị, nhọpụta Canil na -eweta ọrụ ya zuru oke, ebe ọ malitere dị ka onye na -elekọta ụlọ na JW Marriott Cancun Resort & Spa's room, Club 91.
Mgbe afọ atọ gachara, ọ nabatara ile ọbịa ya na ịga ahịa n'ihu ụlọ ya obodo Brazil, ebe a họpụtara ya onye isi ahịa na Renaissance Sao Paulo. N'ime afọ niile ọ nọrọ ebe ahụ, Canil nwere ọrịre ahịa dị iche iche mgbe ọ na -enweta nsonaazụ na otuto dị egwu gụnyere nturu ugo Onye isi ala na onye isi oche gburugburu.
O teghị aka Ike akpọrọ Canil azụ, mgbe ọ nabatara ọnọdụ onye ọrịre ahịa na mkpokọta Marriott Cancun na 2016. Nkwa ya maka ihe ịga nke ọma nke ndị otu ya na ebe ntụrụndụ, ike ya, yana ike idu ndú ya siri ike, nwetara ya nkwalite na nso nso a. Ahịa na ire maka ebe ntụrụndụ nwanne nwanyị.
Mgbe ọ naghị arụ ọrụ, enwere ike ịhụ Canil ka ọ na-eme mkpọtụ n'okpuru anyanwụ, ya na di ya na nwa ya nwanyị dị afọ 11 na-ekpori ndụ n'ụsọ osimiri Cancun.
Iigbọ elu ụgbọ elu Hawaiian na-apụta ike karịa COVID-19 ...
Ndị Taliban dị njikere ịmalitegharị ọrụ ọdụ ụgbọ elu Kabul ...
IMEX America: Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ọhụụ ọhụrụ, anyị ga - aga ...
Kedu ka ndị America ga -esi gaa Canada n'okpuru iwu ọhụrụ?
Airbus na Air France na -atụ anya ike kacha arụ ọrụ nke ọma…
Kwesịrị ka ndị otu UNWTO nye tiketi na Marrakesh ugbu a? Mba ...
Ọnye bụ onye minista njem nlegharị anya Iran ọhụrụ Hon. O kwuru ...
Federationtù Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Njem na-ekpughe ...